सलमानको आग्रहमा नाम परिवर्तन गरेकी आलिया भट्टले आखिर के राखिन् त नाम ? – MediaNP
काठमाडौँ । बलिउड स्टार सलमानले बलिउडमा एउटै नाम गरेका दुई अभिनेत्री हुन सक्दैनन् भनेपछि आफुले नाम परिवर्तन गरेर कियरा राखेको अभिनेत्री आलिया भट्टले बताएकी छन् । ‘फिट अप विद द स्टार्स सजन टु’ को एक एपिसोडमा कियाराले यस्तो बताएकी हुन् ।
आलिया मेरो पहिलो नाम हो । उनले भनिन्, ‘कियारा नामको छनोट आफैले गरेकी हुँ । अब त मेरो आमा बुबाले पनि कियारा भनेर नै बोलाउन सुरु गरेका छन् ।’उनी अहिले ‘लस्ट स्टोरिज’ मा काम गरिरहेकी छन् । यसै विषयलाई लिएर ‘लस्ट स्टोरिज’ मा कसरी गरियो काम भनेर प्रश्न सोध्दा यसमा करण जोहरको नजर परेको बताइन् । किनकी करण अभिनेत्री छान्ने काम गर्छन् । उनलाई राम्रोसँग थाहा छ की कुन पात्रले कस्तो भूमिका दिँदा न्याय मिल्छ ।
‘लस्ट स्टोरिज’ मा कियारासँग भाइब्रेटरसँगको दृष्यलाई छायांकन गरिएको छ । यसलाई कार्टुन नबनाऊ वास्तविक बनाऊ । यो रोचक दृश्य हो । यसलाई हास्याीपद बनाउँनु हुँदैन् । सन् २०१४ मा फिल्म ‘फुगली’ बाट करियर सुरु गरेकी कियारा ‘एम. एस. धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी’, ‘मेशिन’, ‘लस्ट स्टोरिज’ ‘कलंक’ ‘भारत आने नेनु’, ‘विनया विधेया रामा’ लगायतका तेलुगु फिल्महरुमा काम गरिसकेकी छन् ।
कियारालाई चाँडै ‘गुड न्यूज’, ‘कबिर सिंह’, ‘शेरशाह’ र ‘कंचना’ को रिमेकमा समेत देखिनेछिन् ।
अभिनेता नवाजुद्दीनको अनौठो प्रेमकहानी : जसको टिभीले टुटाएको थियो प्रेम